Ndingayenza Nantoni na ngothando (kodwa andiyi kuyenza loo nto) ngeSonka senyama - Izinto Zobugcisa
Ndingayenza Nantoni na ngothando (kodwa andiyi kuyenza loo nto) ngeSonka senyama
Le yayiyingoma yokubuya kwesonka seNyama. Ngo-1977, icwecwe lakhe Ukuphuma esihogweni ivelise iingoma ezithi 'Ababini kwaba baThathu ababi,' 'IParadesi ngoKukhanya kweDashboard,' kwaye 'Uwathathile amagama ngaphandle komlomo wam,' zonke zibhalwe ngumdlali wepiyano uJim Steinman. Emva kokuwa kunye noSteinman kunye nobunzima kubomi bakhe bobuqu, Inyama yeSonka ikhuphe ii-albhamu ezingaphumelelanga ngaphambi kokuhlangana kwakhona noSteinman Ukuphuma esihogweni II: Buyela esihogweni , eyayithathwa njengeyona ndlela yokulandelela kwi-albhamu ka-1977. Esi sinesandi esifana kakhulu neso sangaphambili seNyama yeSonka, kwaye isitayile esiqhutywa yipiyano sihamba kakuhle nabalandeli bakhe bakudala kunye nesizukulwana esitsha sabaphulaphuli, sinceda ukuba oku kube yinto enkulu.
Imvumi yabasetyhini nguLorraine Crosby. Kwakhona kwaziwa ngokuba nguNkskz. Ngokukhulu, 'ubonakale kwizwi lokugcina amanqaku lamagcisa kwaye ucula kwimisebenzi eyahlukeneyo yase-UK. UPatti Russo yimvumi exhasa isonka seNyama ecula amazwi aphilayo kwikhonsathi kunye naye, kwaye kwividiyo yengoma, imodeli uDana Patrick uyangqamana nelizwi likaLorraine.
Julia - London, eNgilani
Kumgca, 'Ndiza kwenza nantoni na ngothando, kodwa andizukuyenza loo nto,' the 'that is whatever he said before that. Umzekelo: 'Kodwa andisoze ndiyilibale indlela oziva ngayo ngoku, Hayi - akukho ndlela - ndingayenza nantoni na ngothando, kodwa andizukuyenza lonto' - 'Lowo' kule vesi uthi 'libala indlela oziva ngayo ngoku. ' Isonka senyama sithethile ngokwakhe Ababalisi beendaba Isiqendu kwiVH1.
Ngokunyanisekileyo -Chicago, IL
Inguqulelo ye-albhamu imalunga nemizuzu eli-12 ubude. Umxube werediyo uqhuba u-7: 58, owawusengoma ende kakhulu ukufumana i-airplay. Kuzo zombini i-US kunye ne-UK, yeyona yona # 1 yabetha kakhulu. Ibetha ophethe irekhodi elidlulileyo, 'Hey Jude' yiBeatles, ngomgama wemizuzwana engama-47.
Emery - London, eNgilani
E-UK, le yeyona nto yabethwa kakhulu ngo-1993, kuthengiswa iikopi ezingama-761,200. Kwakuyi # 1 kwiitshathi zase-UK iiveki ezisi-7, kwaye ngeyayiyiKrisimesi # 1 ngo-1993 ukuba yayihlala # 1 kwiveki yesibhozo. Yabethwa nguMnumzana Blobby ngeKrisimesi engatshatanga.
Isonka senyama siphumelele i-Grammy ye-Best Rock Solo Performance ngomsebenzi wakhe kule ngoma.
UMichael Bay uyalele ividiyo yale ngoma. UDavid Fincher wayengowokuqala, kodwa wayefuna i-1.7 yezigidi kuhlahlo-lwabiwo mali. Kubonakala kunzima ukukholelwa, kodwa iBay-indoda eyayiza kuthi kamva iqondise imovie Abaguquleli kwaye ipheli yehabha - yayiyeyona ndlela inexabiso eliphantsi. I-Bay yenze i $ 750,000, kwaye yenza ujikelezo olunzima kwi-MTV. Iividiyo ezimbini ezilandelayo zenyama yesonka zaye zakhokelwa yi-Bay: 'iDwala kunye neePhupha eziQengqelezayo' kunye 'nezinto ezijongwa ngasemva kwesipili esinokuvela kufutshane kuneso.'
Abagxeki bomculo abaninzi baphakamise iingoma zabo kule ngoma, bebeka uluhlu oluninzi lwee-'Worst Of 'ekupheleni kuka-1993. IBlender wabiza enye yeengoma ezingama-50 ezimbi kunazo zonke kwixesha labo ngo-2004.
Kwimuvi Spiceworld , apho iMeat Loaf idlala khona umqhubi webhasi yeSpice Girls, kukho ingxaki yokuba izindlu zangasese zihlala zixinene. Xa uClifford (umphathi wamantombazana) ecela inyama yesonka ukuba ayilungise, uthi, 'Mamela, ndiyawathanda la mantombazana, kwaye ndiza kuwenzela nantoni na ... kodwa andizukuyenza loo nto.'
ulala kuphela xa kunethayo
ndiyakuthanda kwindawo apho kungekho sithuba okanye ixesha amazwi womculo
r.e.m. -Ukulahlekelwa yinkolo yam intsingiselo
Ndifuna ukuba udlale ngengoma yam yelizwi